Sary sy karatra famantarana · Global Voices teny Malagasy
Sary sy karatra famantarana
Voadika ny 26 Jolay 2019 3:50 GMT
Ampiasao ny sary famantarana antsika rehefa mitatitra momba ny Global Voices na mizara ny tantarantsika. Tahaka ny Global Voices rehetra, manana ny lisansa Creative Commons Attribution (CC-BY) ny sary famantarana. Misaotra anao amin'ny fampiasana izany amim-pitandremana.
Halehibem-pango ho an'ny lafika mazava
Mangarahara PNG: 6000px 2400px 800px 200px Vector: .ai
Ity no sary famantarantsika tsy nasiana loko ary tokony ampiasaina isaky ny azo atao. Manana lafika mangarahara ny dosie PNG, mety tsara amin'ny tranonkala rehetra miloko mazava io dosie io noho izany.
Halehibem-pango ho an'ny lafika matroka (fotsy)
Mangarahara PNG: 2400px Vector: .ai
Ampiasaina amin'ny lafika matroka ity karazany amin'ity sary famantarantsika tsy nasiana loko ity izay ahitana ny sary famantarana manjavona . Manana lafika mangarahara ny dosie PNG ary mety tsara amin'ireo tranonkala maizimaizina.
Sary famantarana efamira ho an'ny lafika mazava
Mangarahara PNG: 2400px 800px 200px Vector: .ai
Ampiasaina amin'ny lafika mazava ity endrika mijidina amin'ny sary famantarana tsy nasiana loko ity. “Mangarahara” ny dosie PNG ary hampiseho ny lafika miloko aorian'izy ireo..
Maodely maitso fotsiny
Modely maitso mahaleotena miaraka amin'ny lafika mangarahara..